၈.၄.၂၀၂၁ မှ ၁၄.၄.၂၀၂၁ အထိ ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း - Padaethar
၈.၄.၂၀၂၁ မှ ၁၄.၄.၂၀၂၁ အထိ ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်းများ
၇ ရက်သားသမီးများ ကျန်းမာ ချမ်းသာသုခပြည့်စုံနိုင်ပါစေ….
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ သင်တန်းတက်ရတာမျိုးတွေ နေရာပြောင်းရတာမျိုးတွေ အချိန်ပြောင်းရတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်။အထူးအဆင်မြင့် တာဝန်များ ရတာကြောင့် တာဝန်များပိပြီး စိတ်ဖိစီးတာမျိုးတွေ စိတ်ညစ်နေတာမျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
တွေမျိုး အပေါင်းအသင်းများနဲ့ မကြာခဏ အချေအတင်ပြောရတာမျိုးတွေ အတိုက်အချုက်လေးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။အိုးသစ်အိမ်သစ် ပြောင်းရွေ့ရတာတွေ မသွားချင်တဲ့နေရာတွေ သွားရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်ခြင်းကြောင့် အထက်လူကြီး ရဲ့အကူအညီတွေ ရတတ်ပါတယ်။ရှယ်ယာလုပ်ငန်းရှင် ပါတနာများရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေလည်းရတတ်ပါတယိ။မြေကိစ္စ အမွေကိစ္စတွေမှာတော့ စကားအခြေအတင်ပြောရတာ ကြန့်ကြာမှုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေ ရက်ရွေ့ဆိုင်းရတာတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဆန်၊ဆီ၊ဆေး၊ဆား၊စက်၊စိန် အင်္ဂါနာမ်နဲ့ပက်သက်သော လုပ်ငန်းများ ကံကောင်းခြင်းဘက်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ငွေကြေးကိစ္စများကတော့ မျှော်မှန်းထားသလောက် အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာ ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေ အများကြီးတွေ့ရပါမယ်။ ကံကောင်းစေရန် အုန်းထမင်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၇၊၅ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တာအတွင်း မိမိရဲ့ကံကြမ္မာ အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးအား အထူးတွက်ချက်ဟောကြားပေးသော တစ်နှစ်တာအထူးဟောစာတမ်းအား မှာယူလိုပါက Messenger မှတစ်ဆင့် မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ…..။1875baydin weekly တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ တနင်္လာသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ငွေကြေးချေးတာတွေ ငွေကြေးအာမခံတာတွေ ငွေကြေးလက်လွန်တာတွေ ရှောင်သင့်ပါတယ်။အရှုံးပေါ်တတ်သလို ငွေတွေ ပြန်မရနိုင်တာကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိတတ်ပါတ်ယ။
မသင့်မြတ်သူတွေနဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ပြီး လုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲလေးတွေကြာင့်အဆင်မပြေတာတွေ အများကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်မွေးလကျော်မှ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ခရီးတိုလေးတွေ မကြာခဏထွက်ရတတ်ပါတယ်။
ပညာရေးနဲ့ပက်သက်တာတွေမှာ အနည်းငယ်ကြန့်ကြာနေတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။သင်တန်းနဲံပက်သက်တာကတော့ လောလောဆယ်မှာ မတက်ဖြစ်တာမျိုး ပျက်စီးသွားမျိုး နဲံကြုံတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းပြောင်းချင်စိတ်တွေ ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲခြင်းကို ခေတ္တစောင့်ဆိုင်းပါအုံး။မွေးလကျော်မှပြောင်းပါက ပို၍အဆင်ပြေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါမယ်။အိမ်ထောင်သည်များ သားသမီးရတနာများရတတ်ပါတယ်။ရွှေ ၊ လူဝင်တတ်ပါတယ်။
အချစ်ရေးမှာတော့ ကိုယ့်အတွက် စိတ်ညစ်ရမယ့် အနေအထားတွေ ကြုံတွေ့နေတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ ဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ပဲ ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန် ထမနဲဆွမ်း ကပ်လှူပေးပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၁ ၊ ၆ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ….. ။1875baydin weekly တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဒီအပတ်ထဲမှာ လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေနဲ့ အကျိုးပေးတာမျိုး အကျိုးတူလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။သိုလှောင်ထားတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများမှ အမြတ်အစွန်းတွေ ရတတ်ပါတယ်။စပ်တူလုပ်ငန်း ရှယ်ယာကိစ္စများ အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
အမှုကိစ္စကြုံနေတဲ့သူများကိုတော့ ငွေမချေးပါနဲ့ ငွေကြေးဆုံးရှုံမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။မိမိအိမ်မှာရော လုပ်ငန်းမှာရော လျှပ်စစ်မီးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ဂရုပြုပါ။မမျှော်လင့်ပဲ လျှပ်စစ်မီး အန္တရာယ်ကြောင့် အမှုအခင်းတွေကြုံတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အကြောင်းကို မကောင်းပြောဆိုခြင်း အပုတ်ချခြင်း ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းအောင် တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။စိတ်ပူဖို့တော့ မလိုပါဘူး။မကြာခင် ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားမယ့် အနေအထားတွေ တွေ့ရပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီး အဝေးတစ်နေရာ သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုး မသွားချင်တဲ့နေရာတွေမှာ သွားနေရာတာမျိုးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေတော့ ရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အရေးပေးခြင်း ဂရုစိုက်ခြင်းကို ခံရတတ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့ နားနဲ့ပက်သက်ပြီး နားအူ နားကိုက် တာမျိုး ကြုံတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန် အုန်းထမင်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၆ ၊ ၇ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ ဘုရားဆင်းတုတော် ဘုရားပုံတော် ရဟန္တာပုံတော် ရဟန္တာများ ရောက်ရှိလာ ကြွရောက်လာခဲ့ရင် ကံကောင်းခြင်းများ လုပ်ငန်းသစ်များ တာဝန်သစ်များ ရရှိတတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာလည်း အောင်မြင်ထူးချွန်ပြီးတော့ မျှော်မှန်းထားလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းမွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ ပညာရပ်များ သင်ကြးရတတ်ပါတယ်။ဖုန်းလုပ်ငန်း ဖုန်းဆိုင်များကတော့ လက်ရှိမှာ အကျိုးပေးနည်းနေတတ်ပါတယ်။အထက်လူကြီးကူညီမှုကြောင့် လုပ်ငန်းမှာတေ့လွဲ လွဲတောလေးတွေ အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။
ဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ စီးပွားရှာခြင်းကိုတော့ သတိထားရှောင်သင့်ပါတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ကိုင်ပါက တရားမျှတာသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီး အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့လည်း အထူးသတိထားစေချင်ပါတယ် ဆုံးရှုံးမှုတွေ များတတ်ပါတယ်။
လူငယ်လူရွယ်များ အိမ်ထောင်ကျတာတွေ ကြုံတတ်တဲ့အတွက် အိမ်ထောင်ရေးနဲံပက်သက်ပြီးတော့ ကံမကောင်းတတ်ပါဘူး။အိမ်ထောင်သည်များကတော့ အိမ်ထောင်ရေးနဲံပက်သက်ပြီးတော့ သစ္စာရှိဖို့တော့လိုပါမယ်။
ကျန်းမာရေးကတော့ အာရုံကြောနဲံပက်သက်တာ ခေါင်းမူး ခေါင်းနောက်တာတွေ ကြုံတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန် သစ်သီး ၄ စိပ် ဘုရားမှာဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပေးပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၈ ၊ ၇ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ လူအများရဲ့ ယုံကြည်လေးစားမှုတွေခံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတိုးတက်တာတွေ တွေ့ရှိတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းသစ်များ ရှာဖွေခြင်း ငွေရင်းနှီးပြီးတော့ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ခြင်းများ သတိထားသင့်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းများ အလုပ်မှာ အတိုက်အခိုက်လေးတွေ ကြုံနေရတတ်တဲ့အတွက် အလုပ်မှာ မပျော်ရွှင်ခြင်း အလုပ်ထွက်ချင်စိတ်များ ပေါက်နေတတ်ပါတယ်။အလှူအတန်းကိစ္စများ အေပြာင်းအရွေ့များ အဆင်ပြေဖြစ်တာလေးတွေနဲံကြုံနေတတ်ပါတယ်။
မိသားစုဝင်တစ်ဦးနဲံ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတတ်ပါတယ်။လူမျိုးခြား ဘာသာခြားများနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ သတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။စွန့်စားပြီး လုပ်ကိုင်ရတာတွေတော့ ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။စပ်တူလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် လူမျိုးခြားနဲ့အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။
အတိုက်အခံလေးတော့ အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ခရီး သို့မဟုတ် ပျော်ရွှင်တဲ့သတင်းတစ်ခု ကြားရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ ခြေလက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေတော့ ကြုံတတ်ပါတယ်။
ကံကောင်းစေရန် ဇီးသီး ၈ လုံးဘုရားမှာ ကပ်လှူဆုတောင်းလိုက်ပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၉ ၊ ၆ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ သောကြာသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
စက်ပစ္စည်းနဲ့ပက်သက်တဲ့လုပ်ငန်း စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ စတင်အဆင်ပြေလာပါမယ်။ရေလမ်းခရီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ခေတ္တရပ်တန့်နေတာမျိုး နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံရပါမယ်။
ဒါပေမယ့် မွေးလကျော်ရင် ပြန်ကောင်းမွန်အဆင်ပြေလာပါမယ်။မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးတော့ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ရတတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မိန်မတစ်ဦးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ကိစ္စ အနှောင့်အယှက်လေးဝင်နေတတ်သလို ဖုန်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ပျက်စီးတာမျိုး ပျောက်ဆုံးတာမျိုး ကြုံတတ်ပါတယ်။တစ်ယူသန်စိတ်နဲံ မိမိစိတ်ထင်ရာလုပ်တတ်တဲ့ စိတ်ကိုတော့ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
အထက်လူကြီးရဲ့ကူညီမှုကြောင့် ရန်တန့်နေသော လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးသွားသော စက်ပစ္စည်းများ ပြန်လည် အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပနဲံပက်သက်တာတွေ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်လို့ ကိုယ်တိုင် ဝီရိယစိုက် ကြိုးစားမှ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပါမယ်။
အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ မိန်းမ အနှောင့်အယှက် ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေတာလေးတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန် လက်ဖက် ၄ ပုံဘုရားမှာ ကပ်လှူဆုတောင်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၉ ၊ ၆ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ စနေသားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ အတိုက်အခိုက်ကိစ္စလေးတွေ အပြောင်းအလဲကိစ္စလေးတွေ ကြုံနေတတ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းကိစ္စ စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စ စာရင်းဇယားကိစ္စတွေ မွေးလကျော်မှလုပ်ကိုင်ပါက အဆင်ပြေပါမယ်။
လုပ်ငန်းသစ်များ နေရာသစ်များ ပြောင်းရွေ့လုပ်ကိုင်ရတာမျိုး ကြုံတတ်ပါတယ်။လူကြီးသူမများရဲ့ ကညီမှုတွေလည်းရတတ်ပါတယ်။စပ်တူ ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများကိုတော့ ခေတ္တရှောင်စေချင်ပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ငန်းများထဲမှ ရွှေ ၊ ရေ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်တိုးတက်ပါမယ်။
ထင်သလာက်တော့ မပေါက်တာတွေ့ရပါမယ်။တာဝန်နဲ့သွားရတဲ့ ခရီးတွေမှာ အနှောင့်အဟန့်အတားတွေနဲ့ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ခရီးမှာ ငွေကြေးကိစ္စအဆင်ပြေတာမျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်။ချစ်သူ အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ ကူညီမှုကြောင့် ကိစ္စအ၀၀တွေ အဆင်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်ပါမယ်။
ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ အဆစ်အမြစ်ကိုက်တာ ခေါင်းကိုက်တာ မကြာခဏဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန် ဘုရားမှာ ပေါက်ပေါကဆုတ် ကပ်လှူဆုတောင်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့ ၃ ၊ ၈ ဖြစ်ပါတယ်။
၈.၄.၂၀၂၁ မှ ၁၄.၄.၂၀၂၁ အထိ ၇ ရကျသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာ ဟောစာတမျးမြား
၇ ရကျသားသမီးမြား ကနျြးမာ ခမျြးသာသုခပွညျ့စုံနိုငျပါစေ….
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
ဝနျထမျးမြားအနနေဲ့ သငျတနျးတကျရတာမြိုးတှေ နရောပွောငျးရတာမြိုးတှေ အခြိနျပွောငျးရတာမြိုးတှနေဲ့ကွုံတတျတယျ။အထူးအဆငျမွငျ့ တာဝနျမြား ရတာကွောငျ့ တာဝနျမြားပိပွီး စိတျဖိစီးတာမြိုးတှေ စိတျညဈနတောမြိုးတှေ ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။
တှမြေိုး အပေါငျးအသငျးမြားနဲ့ မကွာခဏ အခအြေတငျပွောရတာမြိုးတှေ အတိုကျအခြုကျလေးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။အိုးသဈအိမျသဈ ပွောငျးရှရေ့တာတှေ မသှားခငျြတဲ့နရောတှေ သှားရတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။
လုပျငနျးတှငျ ဆနျးသဈတီထှငျနိုငျခွငျးကွောငျ့ အထကျလူကွီး ရဲ့အကူအညီတှေ ရတတျပါတယျ။ရှယျယာလုပျငနျးရှငျ ပါတနာမြားရဲ့ ယုံကွညျမှုတှလေညျးရတတျပါတယိ။မွကေိစ်စ အမှကေိစ်စတှမှောတော့ စကားအခွအေတငျပွောရတာ ကွနျ့ကွာမှုတှရှေိနတေတျပါတယျ။
အလှူမင်ျဂလာကိစ်စတှေ ရကျရှဆေို့ငျးရတာတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ဆနျ၊ဆီ၊ဆေး၊ဆား၊စကျ၊စိနျ အင်ျဂါနာမျနဲ့ပကျသကျသော လုပျငနျးမြား ကံကောငျးခွငျးဘကျကိုရောကျရှိလာပါပွီ။ငှကွေေးကိစ်စမြားကတော့ မြှျောမှနျးထားသလောကျ အဆငျမပွဖွေဈနတေတျပါတယျ။
ပွောငျးလဲခွငျးတှထေဲမှာ ကောငျးသောပွောငျးလဲခွငျးတှေ အမြားကွီးတှရေ့ပါမယျ။ ကံကောငျးစရေနျ အုနျးထမငျးဆပျကပျလှူဒါနျးပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၇၊၅ ဖွဈပါတယျ။
တဈနှဈတာအတှငျး မိမိရဲ့ကံကွမ်မာ အပွောငျးအလဲ အကောငျးအဆိုးအား အထူးတှကျခကျြဟောကွားပေးသော တဈနှဈတာအထူးဟောစာတမျးအား မှာယူလိုပါက Messenger မှတဈဆငျ့ မှာယူနိုငျပါတယျခငျဗြာ။
စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာကွပါစေ…..။1875baydin weekly တဈပတျစာဟောစာတမျး
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ တနင်ျလာသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
မိတျဆှတှေနေဲ့ပကျသကျပွီး ငှကွေေးခြေးတာတှေ ငှကွေေးအာမခံတာတှေ ငှကွေေးလကျလှနျတာတှေ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။အရှုံးပျေါတတျသလို ငှတှေေ ပွနျမရနိုငျတာကွောငျ့ ဆုံးရှုံးမှုတှေ ရှိတတျပါတျယ။
မသငျ့မွတျသူတှနေဲ့ ပွနျလညျသငျ့မွတျပွီး လုပျငနျးအပွောငျးအလဲလေးတှကွောငျ့အဆငျမပွတောတှေ အမြားကွီးဖွဈနတေတျပါတယျ။ကိုယျ့မှေးလကြျောမှ ပွနျလညျလုပျဆောငျမယျဆိုရငျတော့ အဆငျပွလောပါလိမျ့မယျ။ခရီးတိုလေးတှေ မကွာခဏထှကျရတတျပါတယျ။
ပညာရေးနဲ့ပကျသကျတာတှမှော အနညျးငယျကွနျ့ကွာနတောတှေ ရှိတတျပါတယျ။သငျတနျးနဲံပကျသကျတာကတော့ လောလောဆယျမှာ မတကျဖွဈတာမြိုး ပကျြစီးသှားမြိုး နဲံကွုံတတျပါတယျ။လုပျငနျးပွောငျးခငျြစိတျတှေ ပျေါနတေတျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ပွောငျးလဲခွငျးကို ခတ်ေတစောငျ့ဆိုငျးပါအုံး။မှေးလကြျောမှပွောငျးပါက ပို၍အဆငျပွတေဲ့ လုပျငနျးဖွဈပါမယျ။အိမျထောငျသညျမြား သားသမီးရတနာမြားရတတျပါတယျ။ရှေ ၊ လူဝငျတတျပါတယျ။
အခဈြရေးမှာတော့ ကိုယျ့အတှကျ စိတျညဈရမယျ့ အနအေထားတှေ ကွုံတှနေ့တေတျပါတယျ။ကနျြးမာရေးကတော့ ဆိုးဆိုးရှားရှားမဖွဈပဲ ကိုယျလကျမအီမသာ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ကံကောငျးစရေနျ ထမနဲဆှမျး ကပျလှူပေးပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၁ ၊ ၆ ဖွဈပါတယျ။
စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာကွပါစေ….. ။1875baydin weekly တဈပတျစာဟောစာတမျး
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ အင်ျဂါသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
ဒီအပတျထဲမှာ လူမြိုးခွား ဘာသာခွားတှနေဲ့ အကြိုးပေးတာမြိုး အကြိုးတူလုပျငနျးလုပျဆောငျရတာမြိုးတှေ ကွုံတတျပါတယျ။သိုလှောငျထားတဲ့ ကုနျပစ်စညျးမြားမှ အမွတျအစှနျးတှေ ရတတျပါတယျ။စပျတူလုပျငနျး ရှယျယာကိစ်စမြား အကြိုးပေးပါလိမျ့မယျ။
အမှုကိစ်စကွုံနတေဲ့သူမြားကိုတော့ ငှမေခြေးပါနဲ့ ငှကွေေးဆုံးရှုံမှုတှဖွေဈတတျပါတယျ။မိမိအိမျမှာရော လုပျငနျးမှာရော လြှပျစဈမီးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့ ဂရုပွုပါ။မမြှျောလငျ့ပဲ လြှပျစဈမီး အန်တရာယျကွောငျ့ အမှုအခငျးတှကွေုံတတျပါတယျ။
ကိုယျ့အကွောငျးကို မကောငျးပွောဆိုခွငျး အပုတျခခြွငျး ဂုဏျသိက်ခာကဆြငျးအောငျ တိုကျခိုကျတာမြိုးတှေ ရှိတတျပါတယျ။စိတျပူဖို့တော့ မလိုပါဘူး။မကွာခငျ ပွနျလညျသငျ့မွတျသှားမယျ့ အနအေထားတှေ တှရေ့ပါတယျ။
မိသားစုနဲ့ခှဲခှာပွီး အဝေးတဈနရော သှားရောကျတာဝနျထမျးဆောငျရတာမြိုး မသှားခငျြတဲ့နရောတှမှော သှားနရောတာမြိုးတှေ ရှိတတျပါတယျ။အဆကျအသှယျကောငျးတှတေော့ ရတတျပါတယျ။အခဈြရေး အိမျထောငျရေးမှာတော့ ခဈြသူ အိမျထောငျဖကျရဲ့ အရေးပေးခွငျး ဂရုစိုကျခွငျးကို ခံရတတျပါတယျ။
ကနျြးမာရေးကတော့ နားနဲ့ပကျသကျပွီး နားအူ နားကိုကျ တာမြိုး ကွုံတတျပါတယျ။ကံကောငျးစရေနျ အုနျးထမငျးဆပျကပျလှူဒါနျးပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၆ ၊ ၇ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
ဒီရကျပိုငျးတှမှော ဘုရားဆငျးတုတျော ဘုရားပုံတျော ရဟန်တာပုံတျော ရဟန်တာမြား ရောကျရှိလာ ကွှရောကျလာခဲ့ရငျ ကံကောငျးခွငျးမြား လုပျငနျးသဈမြား တာဝနျသဈမြား ရရှိတတျပါတယျ။ပညာရေးမှာလညျး အောငျမွငျထူးခြှနျပွီးတော့ မြှျောမှနျးထားလိုဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ကောငျးမှနျအဆငျ့မွငျ့တဲ့ ပညာရပျမြား သငျကွးရတတျပါတယျ။ဖုနျးလုပျငနျး ဖုနျးဆိုငျမြားကတော့ လကျရှိမှာ အကြိုးပေးနညျးနတေတျပါတယျ။အထကျလူကွီးကူညီမှုကွောငျ့ လုပျငနျးမှာတလှေဲ့ လှဲတောလေးတှေ အဆငျပွသှေားတတျပါတယျ။
ဖွတျလမျးနညျးနဲ့ စီးပှားရှာခွငျးကိုတော့ သတိထားရှောငျသငျ့ပါတယျ။မှနျမှနျကနျကနျ လုပျကိုငျပါက တရားမြှတာသောလုပျငနျးဖွဈပါက ငှကွေေးနဲ့ပကျသကျပွီး အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ငှကွေေးနဲ့ပကျသကျပွီးတော့လညျး အထူးသတိထားစခေငျြပါတယျ ဆုံးရှုံးမှုတှေ မြားတတျပါတယျ။
လူငယျလူရှယျမြား အိမျထောငျကတြာတှေ ကွုံတတျတဲ့အတှကျ အိမျထောငျရေးနဲံပကျသကျပွီးတော့ ကံမကောငျးတတျပါဘူး။အိမျထောငျသညျမြားကတော့ အိမျထောငျရေးနဲံပကျသကျပွီးတော့ သစ်စာရှိဖို့တော့လိုပါမယျ။
ကနျြးမာရေးကတော့ အာရုံကွောနဲံပကျသကျတာ ခေါငျးမူး ခေါငျးနောကျတာတှေ ကွုံတတျပါတယျ။ကံကောငျးစရေနျ သဈသီး ၄ စိပျ ဘုရားမှာဆပျကပျလှူဒါနျးပေးပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၈ ၊ ၇ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ ကွာသပတေးသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
ဒီရကျပိုငျးတှမှော လူအမြားရဲ့ ယုံကွညျလေးစားမှုတှခေံရတတျပါတယျ။လုပျငနျးတိုးတကျတာတှေ တှရှေိ့တတျပါတယျ။လုပျငနျးသဈမြား ရှာဖှခွေငျး ငှရေငျးနှီးပွီးတော့ လုပျငနျးခြဲ့ထှငျခွငျးမြား သတိထားသငျ့ပါတယျ။
ဝနျထမျးမြား အလုပျမှာ အတိုကျအခိုကျလေးတှေ ကွုံနရေတတျတဲ့အတှကျ အလုပျမှာ မပြျောရှငျခွငျး အလုပျထှကျခငျြစိတျမြား ပေါကျနတေတျပါတယျ။အလှူအတနျးကိစ်စမြား အပွောငျးအရှမြေ့ား အဆငျပွဖွေဈတာလေးတှနေဲံကွုံနတေတျပါတယျ။
မိသားစုဝငျတဈဦးနဲံ ပွနျလညျတှဆေုံ့ရတတျပါတယျ။လူမြိုးခွား ဘာသာခွားမြားနဲ့ ဆကျဆံရေးမှာ သတိပွုဆငျခွငျသငျ့ပါတယျ။စှနျ့စားပွီး လုပျကိုငျရတာတှတေော့ ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။စပျတူလုပျငနျးလုပျမယျဆိုရငျ လူမြိုးခွားနဲ့အဆငျပွတေတျပါတယျ။
အတိုကျအခံလေးတော့ အနညျးငယျရှိပါတယျ။အခဈြရေး အိမျထောငျရေးမှာတော့ ခဈြသူ အိမျထောငျဖကျနဲ့ ပြျောရှငျတဲ့ခရီး သို့မဟုတျ ပြျောရှငျတဲ့သတငျးတဈခု ကွားရတတျပါတယျ။ကနျြးမာရေးကတော့ ခွလေကျ ထိခိုကျဒဏျရာရတာတှတေော့ ကွုံတတျပါတယျ။
ကံကောငျးစရေနျ ဇီးသီး ၈ လုံးဘုရားမှာ ကပျလှူဆုတောငျးလိုကျပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၉ ၊ ၆ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ သောကွာသားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
စကျပစ်စညျးနဲ့ပကျသကျတဲ့လုပျငနျး စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား စတငျအဆငျပွလောပါမယျ။ရလေမျးခရီးနဲ့ ပကျသကျပွီး ခတ်ေတရပျတနျ့နတောမြိုး နောကျဆုတျသှားတာမြိုးတှေ ကွုံရပါမယျ။
ဒါပမေယျ့ မှေးလကြျောရငျ ပွနျကောငျးမှနျအဆငျပွလောပါမယျ။မိတျဆှတှေနေဲ့ တှဆေုံ့ပွီးတော့ လုပျငနျးတှေ လုပျရတတျပါတယျ။အကြိုးပေးတဲ့ အကွောငျးအရာတှလေညျးဖွဈတတျပါတယျ။
မိနျမတဈဦးနဲ့ပကျသကျတဲ့ ကိစ်စ အနှောငျ့အယှကျလေးဝငျနတေတျသလို ဖုနျးနဲ့ပကျသကျပွီး ပကျြစီးတာမြိုး ပြောကျဆုံးတာမြိုး ကွုံတတျပါတယျ။တဈယူသနျစိတျနဲံ မိမိစိတျထငျရာလုပျတတျတဲ့ စိတျကိုတော့ရှောငျကဉျြသငျ့ပါတယျ။
အထကျလူကွီးရဲ့ကူညီမှုကွောငျ့ ရနျတနျ့နသေော လုပျငနျးမြား ပကျြစီးသှားသော စကျပစ်စညျးမြား ပွနျလညျ အဆငျပွတေတျပါတယျ။ပွညျတှငျးပွညျပနဲံပကျသကျတာတှေ ကွုံတှရေ့တတျပါတယျ။ဒါပမေယျ့လို့ ကိုယျတိုငျ ဝီရိယစိုကျ ကွိုးစားမှ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိပါမယျ။
အခဈြရေး အိမျထောငျရေးမှာတော့ မိနျးမ အနှောငျ့အယှကျ ရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ အိမျထောငျဖကျနဲ့အဆငျမပွတောလေးတှေ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ကံကောငျးစရေနျ လကျဖကျ ၄ ပုံဘုရားမှာ ကပျလှူဆုတောငျးပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၉ ၊ ၆ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈ ဧပွီလ ၈ ရကျနမှေ့ ၁၄ ရကျနအေ့ထိ စနသေားသမီးမြားအတှကျ တဈပတျစာဟောစာတမျး
ဒီရကျပိုငျးထဲမှာ အတိုကျအခိုကျကိစ်စလေးတှေ အပွောငျးအလဲကိစ်စလေးတှေ ကွုံနတေတျပါတယျ။စကျပစ်စညျးကိစ်စ စာခြုပျစာတမျးကိစ်စ စာရငျးဇယားကိစ်စတှေ မှေးလကြျောမှလုပျကိုငျပါက အဆငျပွပေါမယျ။
လုပျငနျးသဈမြား နရောသဈမြား ပွောငျးရှလေု့ပျကိုငျရတာမြိုး ကွုံတတျပါတယျ။လူကွီးသူမမြားရဲ့ ကညီမှုတှလေညျးရတတျပါတယျ။စပျတူ ရှယျယာလုပျငနျးမြားကိုတော့ ခတ်ေတရှောငျစခေငျြပါတယျ။လကျရှိလုပျငနျးမြားထဲမှ ရှေ ၊ ရေ လုပျငနျးမြား အောငျမွငျတိုးတကျပါမယျ။
ထငျသလာကျတော့ မပေါကျတာတှရေ့ပါမယျ။တာဝနျနဲ့သှားရတဲ့ ခရီးတှမှော အနှောငျ့အဟနျ့အတားတှနေဲ့ ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ခရီးမှာ ငှကွေေးကိစ်စအဆငျပွတောမြိုး ကွုံရတတျပါတယျ။ခဈြသူ အိမျထောငျဖကျရဲ့ ကူညီမှုကွောငျ့ ကိစ်စအ၀၀တှေ အဆငျပွတေိုးတကျအောငျမွငျပါမယျ။
ကနျြးမာရေးအနနေဲ့ အဆဈအမွဈကိုကျတာ ခေါငျးကိုကျတာ မကွာခဏဖွဈတတျပါတယျ။ကံကောငျးစရေနျ ဘုရားမှာ ပေါကျပေါကဆုတျ ကပျလှူဆုတောငျးပါ။ကံကောငျးဂဏနျးကတော့ ၃ ၊ ၈ ဖွဈပါတယျ။
လူသိနည်းသောနမိတ်များ ဒါမျိုးတွေ မလုပ်မိအောင်ရှောင်ပါ